FAQ - Shaoxing Baite Textile Co., Ltd.
Ingabe sithola isampula inkomba?
Jabulile ukuthumela amasampula noma okufanayo isandla amakhasimende free.New kudingeka ukuze ukwazi ukumkhokhela izimali express, ngeke ukubuyisa imali lapho endaweni umyalelo Isivivinyo; uma udinga isampuli efanayo yourrequired, bakhokhele icala izibonelo zalokho, lapho indawo umyalo zokukhiqiza ngobuningi, ngeke ukubuyisela lokhu kwenkokhelo.
Kuyoze kube nini kube izimpahla zami ngomumo khona ukuthunyelwa?
Ezahlukene sebhithi izindwangu babe deliver.As ezahlukene evamile, izinsuku emsebenzini 15-25.
Kunjani MOQ yakho?
Ikakhulu 2000m izindwangu. (Ngaphandle ezibekiweko ekhethekile izindwangu)
ngokushesha Ngingabakha kanjani ubuhlobo lesisho intengo?
Ingabe ucaphune ngokushesha, uma ukhetha izinto zethu, khona-ke ucaphune intengo osukwini olulodwa lokusebenza ngokuvumelana nemfuneko yakho.
Kuyini imigomo yakho kwezidingo?
T / T noma L / C at emehlweni.
Yini nokupakisha yakho?
Ukuze izindwangu: Omunye roll kwelinye polybag, kanye nekhava ngaphandle PP Bag. Futhi couldaccording ukuze requirement.For yakho iyunifomu, isethi eyodwa kwelinye polybag, nayo yonke amasethi 20 phama elinye ibhokisi. Futhi ayengakwenza ngokuvumelana nemfuneko yakho.
Kanjani ukuqinisekisa ikhwalithi ngaphambi oda?
Asikwazanga ukuthumela kini isampula khulula esiphila ziyatholakala eliphakeme sakho. Noma ukuthumela amasampula akho kithi, khona-ke sizokwenza isampuli esiphikisayo ukuvunywa kwakho ngaphambi oda.
Indlela yokusombulula izinkinga ezikhungethe izinga emva yokuthengisa?
(1) Thatha izithombe izinkinga bese uthumela kithi.
(2) Yenza amavidiyo izinkinga bese uthumela kithi.
(3) Thumela emuva ngokomzimba inkinga izindwangu ngu kukhiphe us.After thina ukuqinisekisa izinkinga, ezifana kubangelwa umshini, ukudaya noma ukuphrinta, njll, zingakadluli izinsuku ezintathu, siyosondela up uhlelo wanelisekile ngawe.